ATI AMD ၏, HD 6630M HD ကို 6650M HD ကို 6730M HD ကို 6750M HD ကို 6770M HD ကို 6970M HD ကို 6990M ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ATI AMD ၏, HD 6630M HD ကို 6650M HD ကို 6730M HD ကို 6750M HD ကို 6770M HD ကို 6970M HD ကို 6990M ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ
ဒီဇင်ဘာလ 22, 2014 မောင်းသူ မောင်းသူ, ဗီဒီယိုကဒ် 0
ATI AMD ၏စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ~
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ ATI AMD ၏ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်.
device ကိုမော်ဒယ်: ATI AMD HD 6770M
ATI AMD ၏ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
~ ကို Install လုပ်နည်း
operating စနစ်များ: (စကားဝှက်ကို : 0s ကို-store ကို)
Windows XP ကို​​ 32-bit နဲ့ / 64-bit နဲ့
AMD ၏ ATI ဗီဒီယိုကို VGA Graphic Card ရဲ အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်
OS ကို-STORE အားဖြင့်ယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု
AMD ၏ ATI HD ကို 5430 HD ကို 5450 HD ကို 5470 HD ကို 5650 HD ကို 5730 HD ကို 5750 HD ကို 5770 HD ကို 5830 HD ကို 5850 HD ကို 5870 ဗီဒီယိုကို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ
AMD ၏ ATI HD ကို 4330 HD4530 HD4550 HD4570 HD4650 HD4670 HD4830 HD4850 ​​HD4860 HD4870 ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ
ATI AMD ၏ X300 X600 X700 X1300 X1400 X1600 X1700 ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ
Nvidia Quadro 1000M 2000M 3000M 4000M 5000M 5010M ဗီဒီယို VGA Graphic Card ရဲ Windows ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်ပါ
ATI AMD ၏ဗီဒီယို VGA
မှန်ကန်စွာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် SSD ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို?
device ကိုမော်ဒယ် Samsung က HTC က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ processor ​​ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က ဥပဒေရေးရာအနက် 64-နည်းနည်းက Windows HD Graphics စီပီယူ Intel က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Software များ OS ကို-STORE နည်းပညာ ပရိုဆက်ဆာ
စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု နည်းပညာ processor ​​ကို စီပီယူ မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ Samsung ရဲ့ Galaxy ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု OS ကို-STORE Intel က Server ကို ပရိုဆက်ဆာ စမတ်ဖုန်းများ device ကိုမော်ဒယ် Intel က Nokia က HTC က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet HD Graphics Samsung က Sony Ericsson က 64-နည်းနည်းက Windows Qualcomm မှ